चीनसँग लगानी, व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणबारे छलफल हुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग आपसी मित्रता अभिवृद्धिमा नै जोड दिने भएकाले यसमा लाभहानिको हिसाबकिताब नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
पोखरामा १ अर्ब ५० करोडको मासु खपत हुने
नेपालीहरुको महान पर्व दसैंका अवसरमा पोखरा क्षेत्रमा मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको मासुको खपत हुने भएको छ । हिमालपारीको जिल्ला मनाङ, मुस्ताङबाट ल्याइएका भेडा–च्यांग्रासहित विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका खसी बोका, भैंसी, राँगा, र कुखुराको गरी पोखरा क्षेत्रमा दसैंमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको मासुको खपत हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताउँछन । पोखरा क्षेत्रमा भेडा–च्यांग्राको मात्र करिब ५० करोडको कारोबार हुने गरेको छ । यस वर्ष पोखरामा करिब २० हजार भेडा च्यांग्रा भित्रिदैछन् । प्रतिभेडा च्यांग्राको मूल्य २० हजारदेखि ३० हजारसम्म पर्ने गरेको छ । व्यवसायीहरूले च्यांग्राको तयारी मासू प्रतिकेजी १ हजार ५ सय रुपैयाँले बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
बाँके र तनहुँ घटना नवमण्डले प्रवृत्ति : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हालै बाँके र तनहुँमा भएका घटनालाई ‘सत्ता संरक्षित नवमण्डले प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कांग्रेसले बाँकेमा जिल्ला सभापति किरण कोइरालामाथिको आक्रमण र तनहुँमा केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालमाथि भएको आक्रमणको प्रयासलाई यस्तो भनेको हो ।
नेकपाले पाउला नयाँ सभामुख ?
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद अब सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाहेकका दलको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार विद्यमान अवस्थामा समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राजपा वा स्वतन्त्र सांसदले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले विद्यमान संघीय संरचनाको एजेन्डालाई फेरि उचाल्न शुरू गरेको छ । पहिचानको आधारमा संघीय संरचना हुनुपर्ने र आफूहरू त्यसकै लागि आन्दोलनरत रहेको राजपाका नेताहरूले जनाएका छन् । राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरले राज्यले पहिचानको आधारमा विभेद गरेको र विभेद अझ जारी रहेको बताए । सोमबार राजपा कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ठाकुरले यस्तो बताएका हुन् ।
सोमवार, आश्विन १३, २०७६
सरकार पञ्चायत फर्काउन उद्दत छः थापा
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले अहिलेको सरकार पञ्चायती व्यवस्था फर्काउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । दसैं, तिहार, नेपाल सम्वत् र छठ पर्वको अवसरमा आइतबार काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक खाडलमा फस्दै नेपाल
केही महिनायताका कूटनीतिक गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी रणनीतिक खाडलमा नेपाल फस्दै गएको देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले चिनियाँ पक्षले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने र अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व गुम्न नदिने गरी चालेको शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक खाडलमा फस्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेकपाको चियापान २९ असोजमा
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दसैँ, तिहार, नेपाल सम्वत्, छठ, इद, ल्होछारका अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्ने भएको छ । नेकपाले कोजाग्रत पूर्णिमाको पर्सिपल्ट असोज २९ गते भृकुटीमण्डपमा चियापान आयोजना गर्न लागेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको दाबी गरेका छन् । फास्ट ट्रयाक, सुरुङमार्ग, वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरु अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले केही वर्षमै मुलुक समृद्धिको नयाँ यात्रामा अगाडि बढ्ने बताए । सहिद उमेशचन्द्र थापा स्मृति प्रतिष्ठानको भवन उद्घाटनका लागि प्यूठान आएका मुख्यमन्त्री पोख्रेलले संविधान जारी भएसँगै देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा समेत परिवर्तन भएको उल्लेख गरे ।
कर्णालीमा २२ विधेयक पारित
गठन भएको डेढ वर्षमा कर्णाली प्रदेशसभाले २२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । कर्णालीका जनताको हितमा आधारित कानुन निर्माणका लागि वस्तुस्थितिको अध्यायन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र कुमार यादवले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ : अनेरास्ववियु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिएर सञ्चालन गनुपर्ने बताएको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कलेज चलाउन नसक्ने भए राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
निवासमा पुगेर देउवालाई भेटे अमेरिकी राजदूतले
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बिहीबार बिहान उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो ।
उपनिर्वाचनका लागि २१ नयाँ दल दर्ता
आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा २१ वटा नयाँ दल दर्ता भएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका २१ दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ ।
बिहिवार, आश्विन ९, २०७६
‘सरकार छोड्ने शर्तमा पार्टी एकीकरण हुँदैन’
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकीकरण सरकारमा बस्ने र छोड्ने शर्तमा एकीकरण नहुने समाजवादी पार्टीका नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । दुबै दलबीचको एकीकरणका लागि एक अर्काका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले सरकार छाडेमात्र एकता हुने भनी आएको टिप्पणीप्रति उनीहरूको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोजेको छैनः पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले सरकारको विकल्प नखोजेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन दाङले बुधबार घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले कांग्रेसले सरकारको विकल्प नखोजेको तर सरकारलाई सहि मार्गमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।